फोटोहरू अपलोड गर्नुहोस् नग्न महिला - नग्न महिला - एमेच्योर फोटो [शीर्ष 10 2021]
कसरी तपाईंको फोटो र भिडियो अपलोड गर्ने हेर्नुहोस् नग्न महिला १।.
फोटोहरूमा साइट प्रवेश गर्न केहि दिन लाग्छ।
फोटो आवश्यकताहरुमा ध्यान दिनुहोस्:
शीर्षक, पाठ र सम्पर्क ईमेल प्रविष्ट गर्नुहोस् (यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने)। ईमेलको भित्र सम्पर्क ईमेल राख्नुहोस् यदि तपाईंलाई मन छ भने, शीर्षक मा कहिल्यै तर छैन। तल उदाहरण हेर्नुहोस्:
शीर्षक: खानको जोडी
पाठ: हामी एमजीको ग्रामीण इलाकाका एक जोडी हौं, उनी २ she वर्षीया उनी। हामी जोडी, हाम्रो ईमेलको साथ फोटोहरू साटासाट गर्न चाहन्छौं: [ईमेल सुरक्षित]
यो अर्को साइट द्वारा ब्रान्ड गरिएको हुनु हुँदैन;
फोटोहरूले अनुहार लुकाउनुपर्दछ, मसँग साइटमा पहिचान भएका व्यक्तिहरूसँग समस्याहरू थिए। फोटोहरू जुन अनुहार देखा पर्दछ प्रकाशित गरिने छैन!
न्यूनतम १० फोटो र अधिकतम २०, यदि तपाईंसँग भन्दा बढि उत्तम व्यक्तिहरू भन्दा फरक छ र प्रत्येक ग्यालरी र पाठ प्रकाशित गर्न प्रति हप्ता १ ईमेल पठाउनुहोस्, यो यस तरिकाले उत्तम छ।
NOO धेरै सानो (500 × 500 भन्दा कम) हुनुपर्दछ, आदर्श more०० × ×०० भन्दा बढी र १०२600 × १०२600 भन्दा कम। विशाल आकारमा फोटोहरू नपठाउनुहोस्, सीधा तपाईंको क्यामेरा वा सेल फोनबाट आउटपुट गर्नुहोस्। यो पठाउन तपाईको लागि ढिलो छ, मलाई प्राप्त गर्न र प्रकाशनको अघि यहाँ प्रक्रिया गर्न;
बिभिन्न फोटोहरू पठाउनुहोस् ताकि उनीहरू धेरै समान देखिँदैनन्;
JPG ढाँचा, सँधै!
यी सिफारिशहरू पूरा नगर्ने फोटोहरू लाइभ हुन सक्छ, तर साइटमा पोस्ट गर्न लामो समय लिन सक्दछ।
NOO नाबालिगको फोटो कहिले पनि नपठाउनुहोस्, जसले अवैध फोटो पठाउछ उनीहरूको डाटा र ईमेल सक्षम अधिकारीलाई पठाइनेछ।
भिडियोको मामलामा, तपाईं तिनीहरूलाई ईमेल मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ वा तिनीहरूलाई रैपिडशेयर, फाइलसोनिक वा अन्य सेवामा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई भिडियो ठेगाना र इच्छित शीर्षक पठाउन सक्नुहुनेछ।
लाई पठाउनुहोस्: [ईमेल सुरक्षित]
वेबसाइट, विज्ञापन / विज्ञापन र ग्यालरी